Muuse Biixi iyo Siyaasiyiinta Majeerteen | allsanaag
Muuse Biixi iyo Siyaasiyiinta Majeerteen
Saxaafadda iyo Siyasiyiinta Majaeerteen ma Mujrimkii gacan ku dhiiglaha ahaa ee Muuse Biixi ayeey maanta Mujaahid ku sheegeen.
Maalmo ka hor, Mujrimka gacan ku dhiiglaha ahaa Muuse Biixi, ayaa isaga oo la hadlaya Beesha Daarood waxa uu ku khudbadeeyey “taariikhadayada awoowayaashiin ayaa yaqaana ee soo Waydiiya”. Ma jirin taariikh uu awoowayaashiis lahaayeen ee la garanayo, ee qura wxuu ka hadlayey Dumar iyo caruur ka soo jeeday beesha Daarood oo aan hubaysnayn oo Jabhaddii SNM uu madaxda ka ahaa ay ku xasuuqeen gobolada Sool iyo Sanaag.
Maanta in qaar ka mid ah siyaasiyiinta Beesha Majeerteen ay isugu hambalyeeyaan in “Mujaahid” Muuse Biixi uu guulaystay, iyaga oo og taariikhdiisa madow iyo danbiyaddiisii dagaal , waa nasiib daro ku habsatan Beeshan oo u af duuban koox yar oo dhaqanka iyo tolnimadu ku yar tahay
Kooxdani, waa kooxda Mucaaradnimada madaxweyne Farmaajo kula saxiibay Waare iyo Xeef oo soo abaabulay shirkii lagu qabtay Kismaayo. Waa kooxda aaminsan in Sool iyo Sanaag lagu daro Somaliland,
Kooxdani, waa kooxda Cabdi qaybdii oo Gacan ku dhiigle ah, dagaal ooge iyo , danbiye dagaal ka sameeyey gobolka Mudug ku maslaxay inay u sameeyaan Maamul goboleedka Galmudug, lacagna ku bixiyaan .
Ugu danbayntii Hooyadii ay dileen jabhadihii SNM iyo USC, oo loo dilay Isirka ay ka soo jeeday oo ahaa Daarood, laguna dilay Xingalool, Xudun iyo Gaalkacayo. Kuwii dilay ma ahayn Mujaahidiin ee waxay ahaayeen mujrimiin. Wxaana ka mid ahaa Siilaanyo, Muuse Biixi, Cabdi qaybdiid iyo Galaal. Kuwa maanta magaca diinta dadka ku dilayaa maaha Mujaahidiin waa Dadqalatooyin.
Sodon sano ka hor nimankan uu Maxamed Mooge iyo Sahro Halgan ay ka mid ahaayeen, ma ku sheegi lahayd Mujaahidiin u dagaalamyey Diinta Islaamka oo la dagaalamyey Gaalo ku noolAYD Sool, sanaag iyo Awdal
Soomaalida Neceb Midnimada Somaliya (SNM)
← Xisbigii Marabbidu ku badnaayeen oo laga adkaaday Next Post →